Coronavirus: Maxaa looga shakiyay guulaha uu Shiinaha ka gaaray xanuunkan safmarka ah? |
Coronavirus: Maxaa looga shakiyay guulaha uu Shiinaha ka gaaray xanuunkan safmarka ah?
Shiinaha ayaan soo sheegin wax dhimasho ah oo ka dhalatay coronavirus gudaha dalkaas, markii ugu horreysay tan iyo intii uu xanuunku ka dillaacay halkaas. Balse waxaa jira su`aalo isa soo taraya oo ku saabsan saxnimada xogtaas, iyo sida loo aamini karo warbixinta Shiinaha ee ku saabsan dillaacitaanka xanuunka.
Sidoo kale xildhibaannada Mareykanka ayaa Shiinaha ku eedeeyay inay ka been sheegtay baaxadda dillaacitaanka xanuunka.
Iyadoo kiisaska xanuunka ee dunida ay sii kordhayaan – Mareykanka ayaa durba Shiinaha kala wareegay tirada ugu badan ee kiisaska iyo dhimashada ee coronavirus.
Balse waxaa jira walaac isa soo taraya oo ku aaddan in Shiinaha uusan gebi ahaanba daacad ka ahayn heerka kiisaska iyo dhimashada xanuunka.
Aaminaad darradan ayaa ku saleysan taariikh hore oo uu Shiinuhu leeyahay.
Taariikh ku saabsan xog qarsoodi ah
Shiinaha kuma laha sumacad fiican, marka ay timaaddo inuu keeno tiro rasmi ah oo ay dunidu rumeysato.
Waxaa tusaale loo soo qaadan karaa xogta ku saabsan dhaqaalihiisa.
Si ka duwan dalal badan, xogta dhaqaalaha Shiinaha, ayaa muddo dheer loo arkayay mid aan ka tarjumeynin sawir sax ah oo ku aaddan horumarkiisa dhaqaale.
Kahor xanuunkan safmarka ah, dowladda ayaa sanadkan 2020 qorsheyneysay koboc dhaqaale oo 6% ah. Muddo sanado ah saadaasha waxay u dhoweyd in lagu guuleysto, iyadoo uusan wax khalad ah ka imaaneynin.
Balse waxaa jira dhaqaala-yahanno ku sugan meel ka baxsan Shiinaha ayaa arrintaas shaki ka muujinaya.
Awoodda Xisbiga hanti-wadaagga ayaa mararka qaar waxay ku dhisan tahay saadaalin iyo hiigsi, iyadoo la qarinayo xaqiiqda marka lagu guuleysan waayo hadafka xisbiga.
Dadka qaar ayaa ku qiyaasaya xogta koboca dhaqaalaha Shiinaha ee rasmiga ah inay tahay kala bar tan uu Shiinuhu sheegay.
Haddii Shiinaha si joogto ah loogu cambaareynayo ka been sheegidda wax muhiim ah sida dhaqaalaha dalkaas, waxaa macquul ah inay sidoo kale ka been sheegi karto xogta Covid-19.
IDhaqan wax qarin oo hore
Maalmihii la soo dhaafay, sarkaalka ugu sarreeya ee Xisbiga Hanti-wadaagga ee gobolka Hubei, Ying Yong, ayaa saraakiisha gobolka ee xanuunku uu ka soo bilowday ku boorriyay inay ka hortagaan qarinta xogta xanuunka.
Waynu ognahay in fayraska uu ka soo bilowday Wuhan bishii December 2019. Balse wax qarsoon maaha in Shiinaha uu daah saaray jiritaankiisa, baaxaddiisa iyo saameyntiisaba marxaladihii hore ee xanuunka.
Duqa magaalada Wuhan ayaa hadda kahor qirtay inaan wax tallaabo ah la qaadin tan iyo bilowgii January – markaas oo qiyaastii 100 kiis la xaqiijiyay – sidoo kale 23-kii January, markaas oo magaalada bandow lagu soo rogay.
Shiinaha ayaa jiritaanka xanuunka la wadaagtay WHO 31-kii December. Balse waxaan sidoo kale ognahay in xilliyadaas, dhaqtar isku dayay in saaxiibbadiis ay isla shaqeeyaan uu uga digo xanuunka uu ka mid ahaa koox ay booqdeen booliiska.
Dr Li Wenliang iyo dad kale ayaa la aamusiyay. Dr Li ayaa mar dambe u dhintay xanuunka Covid-19.
Dhowr toddobaad kahor, xilligii madaxweyne Xi Jinping uu booqashadii ugu horreysay ku tegay Wuhan, tan iyo intii uu xanuunku halkaas ka dillaacay – ma jirin kiisas cusub oo xanuunka ah oo laga soo sheegay guu ahaan dhulweynaha Shiinaha, marka laga reebo gobolka Hubei.
Xilliyadii uu Xi halkaasi booqday, wakaaladda wararka Japan ee Kyodo News ayaa baahisay walaaca laga qabo dhaqtar aan magaciisa la sheegin oo magaalada ku sugan, kaas oo sheegay in saraakiisha dowladda ay ku amreen in kiisaska cusub ay ka saaraan tirada rasmiga ah.
Warbixin ka soo baxday sirdoonka Mareykanka oo loo gudbiyay Aqalka Cad ayaa sidoo kale lagu sheegay in warbixinta Shiinaha ay tahay mid aan dhammeystirneyn isla markaana ay tirada tahay mid been ah.
Maxay tahay sababta loo daboolayo dillaacitaanka xanuunka? Waxay isugu jiri karaan dhowr sababoo: In bulshada laga qariyo xasarad kale oo caafimaadka bulshada ah, in laga hortago walaac ka dhasha ama in la xakameeyo warbaahinta iyadoo rajo laga qabo inaysan ka sii darin xaaladda.
Beddelidda tirada kiisaka
Xitaa haddii tirada rasmiga ah ee la sheegay loo arko mid sax ah, sumcadda Shiinaha ee ku aaddan tirade ayaa dhowr jeer su`aal la geliyay.
Tan iyo bolowgii January ilaa horraantii March, ilaa toddobo qeexitaan oo kala duwan oo Covid-19 ah ayuu soo saaray Guddiga Caafimaadka Qaranka.
Prof Ben Cowling oo ka tirsan Jaamacadda Hong Kong ayaa sheegay in baaritaankii hore ee xanuunka diiradda lagu saaray kiisaska burukiitada ee lala xiriiriyay suuqa qoyan ee Wuhan halkaas oo uu xanuunku markiisii hore ka dillaacay.
Wuxuu haatan ku qiyaasayaa inay jiri karaan qiyaastii 232,000 oo kiisas la xaqiijiyay ah. Waxayna tiradaas saddex jeer ka badan tahay tan la shaaciyay.
“Waxaan u maleyneynaa in heerka qarinta uu aad u badnaa marxaladdii hore ee dillaacitaanka xanuunka,” ayuu yiri. Waxaa sidoo kale jira kiisas la xiriira calaamadaha – dadka aysan ka muuqan wax calaamado ah.
Ilaa toddobaadkii hore, Shiinaha kiisaskaas kuma aysan darin tirada ay hayso, xitaa kaddib markii la xaqiijiyay. Madaxweyne Xi Jinping, iyo saraakiisha u dhow, ayaa hore isugu dayay inay soo celiyaan sumcadda Shiinaha.
Toddobaadkii la soo dhaafay, Ra`iisul Wasaaraha dalkaas Li Keqiang – ayaa sheegay in dhammaan maamullada gobollada dalkaas ay soo saaraan tiro saxan oo cad.
Dr Li iyo dhaqaatiir kale oo hore loo ciqaabay una dhintay fayraska, ayaa loo aqoonsaday inay shahiideen.
Toddobaadyo kaddib bandowgii Wuhan, warbaahinta dalkaas ayaa weriyay sheegashooyin ku saabsan in madaxweynaha uu shakhsi ahaan kulamo ka qabtay arrintaas toddobaadkii ugu horreeyay January, inkastoo aan xilligaas la dhaacin.
Shiinaha ayaa gargaar iyo dawo u dirtay dalalka ugu baahida badan, sida Talyaaniga, iyo dalal kale oo ay ka mid tahay Serbia.
Dowladda Shiinaha ayaana sidoo kale sheegatay in wejigii ugu horreeyay ee tijaabada talllaalka xanuunka ee bani`aadamka lagu sameeyay lagu soo gabagabeeyay muddo toddobaadyo ah.
Hadii ay sax tahay xogta Shiinaha ee xanuunka coronavirus iyo haddii kaleba, waxay u muuqataa in Shiinaha uu ka soo baxayo xasaradda ugu daran ee xanuunka, waxaana muuqata in dalkaasi oo xanuunku uu ka soo bilowday uu haatan doonayo in loo arka kii soo afjaray.